बिवाहपछि किन अरुतिर यौनसम्पर्क राख्छन ? यस्तो छ कारण - Sakaratmak Soch
केही पहिले पथरी, मोरङमा भएको महिला हत्याको विषय र उनीसँग जोडिएका पात्र र परिवेशहरुको समाचारले फेसबुक र अनलाइन समाचारका भित्ताहरु सजिएका थिए । समाचारमा लेखिए अनुसार उनी एक पसल चलाएर बसेकी व्यवसायी थिइन् । जसका श्रीमान बैदेशिक रोजगारीको लागि विगत लामो समयदेखि विदेशमा थिए । उनका एक छोरा उनीसगैँ डेरामा बस्थे ।उनी वैदेशिक रोजगारबाट श्रीमानले पठाइदिएको रकम र आफ्नो व्यवसायबाट आएको रकमले घर चलाउथिन् र छोरालाई पढाउँथिन् । यहाँसम्म उनका आफन्त, साथीभाइ र छरछिमेकमा यही परिचय थियो, त्यो बाहेक उनलाई धेरैले चिन्दैन थिए । तर, उनको हत्या भए लगत्तै एकाएक चर्चामा आइन् । उनको परिचय अब त्यतिमा मात्र सीमित भएन, त्यहाँ उनको विवाहेत्तर सम्वन्धको पनि चर्चा भयो । त्यो सम्वन्धको चर्चा मात्र भएन कि हत्यामा सम्लग्नताको आरोपमा उनका प्रेमीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अझै अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
उनका प्रेमी पनि विवाहित हुन् भने उनका दुई छोरा समेत छन् । त्यो भन्दा अझै अघि बेलबारीमा एक प्रेमीले आफ्नी प्रेमिकालाई आफ्नै घरमा हत्या गरी आफ्नै गाडीमा राखी कोशी व्यारेजमा फ्याँकेर आएपछि पनि प्रेमिकाको परिवारसँगै गएर प्रहरी कार्यालयमा प्रेमिकाको खोजी गरीदिन जाहेरी दिए । प्रहरीले अनुसन्धान शुरु गर्यो । केटी पक्षका आफन्तको वयान, उसको प्रेम सम्वन्ध, केटीले विवाह गर्न दिएको दवाव र सोही कारण भएको झगडा र हराएको साझँसम्म पनि दुईजना सगैँ रहेको प्रमाण लगायत सि.सि. क्यामेरको फुटेजको आधारमा प्रहरीले हत्यारा पक्राउ गर्यो । प्रेमी तथा हत्यारा एक राजनैतिक जिम्मेवारी पाएका सामाजिक व्यक्तित्व (नेकपाको पूर्वनगर कमिटी अध्यक्ष) थिए । उनकी श्रीमति दुई छोराहरु पढाउन काठमाडौं बस्दै आएकी थिइन् । उनकी प्रेमिका श्रीमानबाट अलग भएकी एक छोरीकी आमा थिइन् ।
अघिल्लो वर्ष दाङका एक व्यापारीलाई उनकी प्रेमिकाले सल्यानको जंगलमा बोलाएर मान्छे लगाई हत्या गरिएको समाचार पनि निकै दिन आईरहे । उनी पनि एक प्रतिष्ठित व्यापारी थिए, जो विवाहित थिए । यी त केही प्रतिनिधि घटना हुन् विवाहेत्तर सम्वन्धका जो अपराधमा परिणत भए र बाहिर आए । यस्ता विवाहेत्तर सम्वन्धहरु जोडिएर कयौं अपराधिक घटना घटेका छन् ।
हामीले हाम्रो समाज कतातिर डोर्याइरहेका छौं ? हामीले हाम्रा अग्रजहरुबाट के सिकेका थियौं र भावी पुस्तालाई के सिकाइरहेका छौं ? हामी आधुनिकतातर्फ प्रवेश गरेसगैँ हाम्रा पूर्वीय मान्यताहरुलाई विर्सिएर किन खुला पश्चिमा संस्कारमा रमाउन खोजिरहेका छौं ? पश्चिमाहरु वेद, उपनिषद्, महाभारत, गीताजस्ता ग्रन्थहरु र यसले दिशार्निदेश गरेको समाजको अध्ययन गरी अवलम्वन गर्दै गर्दा हामी भने आत्मापरक स्वार्थ र खुशीका लागि परिवार र समाज विखण्डनको दिशामा अग्रसर छौं । सयुंक्त परिवारमा एकअर्काविच माया, ममता र लडाईझगडा गर्दै एकअर्काको दुखसुख बाँड्दै हुर्किएका हामी यसरी आत्मपरक हुन थाल्ने हो भने अहिलेको हाम्रो एकल परिवारमा जन्मिएर प्रविधिसँग खेल्दै एक्लै हुर्किएका सन्तानले हामीबाट के सिक्लान् र आफ्ना सन्तानलाई के सिकाउलान् ?
हामीले आफ्नालाई ढाँट्दा ढाँट्दै आफैँलाई ढाँटिरहेको कुरा थाहा पाएनौं । यसरी आफैंलाई ढाँटेर कति दिन रमाउन सक्छौं हामी क्षणिक सम्वन्धहरुमा ? कसरी सजाउन सक्छौं हामी परिवार र आफ्नै सपनाहरु ? अनि कसरी जोगाउन सक्छौं समाजका मूल्यमान्यता, परिवारको साख, बालवच्चाको भविश्य अनि आफ्नै जीवन र अस्तित्व ? सूचना प्रविधिले विवाहेत्तर सम्वन्धको सुत्रपात गरेको पक्कै होइन । तर, यसले यस्ता सम्वन्धहरुलाई सहज र खुकुलो बनाइदिएको चाहिँ हो ।
विवाहेत्तर सम्वन्ध आफ्नो जीवनसाथीको अनुपस्थितिमा जैविक आवश्यकताले जन्माएको वाध्यात्मक अवस्था हो या जीवनसाथीसँगको असन्तुष्टि ? या नयाँ यौन पार्टनरको खोजी ? चाहे जेसुकै कारणले मानिसहरु यस्तो सम्वन्धमा पुगुन् नेपाली समाजमा यस्तो सम्वन्ध अवैधानिक, अनैतिक र पापकर्म मानिन्छ । समाजले मान्यता नदिएको यस्तो सम्वन्धमा भएका मानिसहरु शारीरिक रुपमा त सन्तुष्ट होलान् तर मानसिक र पारिवारिक रुपमा सधैँ तनावमा हुने गर्छन् । सामाजिकरुपमा पनि सम्मानजनक अवस्था छैन उनीहरुको । अहिले समाजमा घटिरहेका कतिपय घटनाको अन्तरवस्तु पनि यस्तै सम्वन्धको रहेको पाइएको छ ।
तिम्रो शंकामात्र होला, सबै कहाँ जान्छन् र ? मैले उसको विश्वास जगाउनका लागि भनेँ । उसले सहजै भनी ‘जाओस्, महिनामा एकपटक त जाला नि, कति नै पो खर्च गर्ला र ? म पो परिवारसँग छु, पर्खिन सक्छु, उ त एक्लै छ, एक–एक वर्षसम्म उसलाई त गाह्रै होला नि । अरुले त केटी नै राखेका हुन्छन्, जसका लागि कमाएको सबै सक्छन्, यहाँ परिवारलाई पठाउँदैनन् । त्योभन्दा त कहिलेकाही त्यता (रेड लाईट एरिया) जाने मान्छे धेरै राम्रो ! कमसेकम परिवार त हेर्छन् । परिवारमा तनाव त हुन्न ।’
उसका कुरा सुनेर म अवाक भएँ । साँच्चै अन्य देशहरुमा जस्तै नेपालमा पनि यस्तै वैधानिक रेड लाईट एरियाहरु भए कोही पनि मानिस मानसिक तनावबाट गज्रनु पर्ने थिएन होला । कुनै पनि परिवार विखण्डन हुने थिएन होला । कोही पनि मानिस समाजबाट बहिष्कृत हुनुपर्ने थिएन होला । कुनै पनि समाज विकृत हुने थिएन होला कि ?
माया, प्रेम, मोह, लोभ, ईष्र्या, काम, क्रोध जस्ता आफ्ना संवेगहरुलाई आवश्यक नियन्त्रण गर्न सक्ने भएर नै मानिसलाई विवेकशील प्राणी भनिएको हो । नत्र त मानिस र पशु जातिमा फरक के नै हुन्थ्यो र ? जैविक आवश्यकतालाई पूरा गर्न पाउनु अधिकार हो । तर, दुरुपयोग गर्नु अपराध हो । साथै सामाजिक मूल्यमान्यता जोगाई सभ्य समाज निर्माण गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो । त्यसैले हामीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै गर्दा आफ्नो कर्तव्यलाई पनि सम्झियौँ भने मात्र हाम्रा सामाजिक मूल्यमान्यताहरुले दर सन्तानलाई पनि घरपरिवार, समाज र राष्ट्रप्रति नैतिक बन्न प्ररित गर्ने थियो ।